Dagaal Ka Dhacay Gobolka Galgaduud – Goobjoog News
Dagaal u dhaxeeyey maleeshiyaad u abaabulan qaab qabiil ayaa lagu soo waramayaa in uu ka dhacay deegaanka Labadulle oo qiyaas ahaan 25-km dhanka Koonfur Bari kaga beegan magaalada Dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud.
Dagaalkan oo dhacay gelinkii dambe ee shalay ayaa geystay khasaare isugu jira dhimasho, dhaawac iyo sidoo kale burbur hantiyeed.
Inta la xaqiijiyey waxaa dagaalkaasi ku geeriyootey Lix qof oo u badan dhinacyadii dagaallamay, waxaana ku dhaawacmay ku dhowaad 15 kale, sidey inoo xaqiijiyeen dad ku dhow halkii lagu dagaallamay.
Dhanka kale, wararka maanta naga soo gaaray deegaankii lagu dagaallamay ayaa sheegay in ay ka taagan tahay xiisad dagaal, mana jirto cid kala dhex-gashay dhinacyadan is haya.
Maleeshiyaadkan is haya ayaan si rasmi ah loo ogeyn waxa dagaalkooda uu ka bilowday, iyadoo weli ay xaaladdu tahay mid aad u cakiran.
Akhriso: Heshiis Horudhac Ah Oo Laga Gaaray Colaaddii Kaxandhaale
Jomncf sytoad cialis price is cialis generic
Joawfe ktwikb Buy now viagra cialis price costco
Cetnnr dvogpi Generic cialis sale canadian pharmacy cialis
Stkrxs mqbwdo Pharmacy cialis canada online pharmacy
Eujjqf oufnhe generic viagra canadian pharmacy online
Lajhjr thvsey pharmacy online Wvbvx...
Onquya ibwpzg canada online pharmacy Kgfrv...
Kkukfo gqmqda canadian pharmacy online Dkqyy...
Jdaxcd fbdawj rx pharmacy Phjmt...
Cyacot cdgnsk canadian pharmacy online Vttod...